केपी–माधव मिल्दा बादललाई धोका ! - Sidha News
काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्रको राजनीतिक द्वन्द्व समाधानको दिशातर्फ अघि बढ्दा राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार रामबहादुर थापा ‘बादल’ वा डा. खिमलाल देवकोटामध्ये एकजनाले धोका पाउने निश्चित थियो । पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमले अन्ततः बादलले नै धोका पाउने त होइनन् भन्ने आशंकालाई बलियो तुल्याएको छ ।
बागमती प्रदेशअन्तर्गत राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा बादल र देवकोटा यस्ता उम्मेदवार हुन्, जो एउटै पार्टीका दुई अलग समूहको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । बादल नेकपा एमालेका आधिकारिक उम्मेदवार हुन् भने डा. देवकोटालाई एमालेको खनाल–नेपाल पक्षले उम्मेदवार बनाएको हो ।
देवकोटालाई काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपालको उपेन्द्र–बाबुराम पक्षले समेत समर्थन जनाएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य पदको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समयसम्म एमालेभित्रको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको थियो । तर, पछिल्ला दिनमा पार्टीभित्र विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले दुवै पक्षका पाँच–पाँच सदस्यसहितको कार्यदल बनाइएको छ ।
यद्यपि एमालेले अहिलेसम्म बादल नै आफ्नो आधिकारिक उम्मेदवार रहेको बताउँदै आएको छ भने अर्का उम्मेदवार खिमलालले पनि एमालेकै भोटले आफू विजयी हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउँदै आएका छन् । बादल पराजित भएको अवस्थामा ओलीले सरकारमा नयाँ गृहमन्त्री खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
किनकि संविधानले संघीय संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई ६ महिनाभन्दा बढी अवधि सरकारमा रहन बन्देज लगाएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका भने यसअघि विगतमा जगतबहादुर बोगटी राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदाको अवस्थासँग अहिलेको अवस्थालाई तुलना गर्दछन् । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘जगतबहादुर बोगटी राष्ट्रिय सभाको सदस्य निर्वाचित हुँदाको अवस्थासँग अहिलेको अवस्था मिल्न खोज्छ । त्यतिबेला उनी राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनका पछाडि माधव नेपालसँग सीपी मैनाली पक्षधरले विद्रोह गरेका थिए ।’
माधव नेपाल पक्षले अहिले खिमलाल देवकोटाको साथ छोडेमा माधव नेपालकै राजनीति समाप्त हुने भएकाले उनीहरुले त्यस्तो गल्ती नगर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको रोकाले बताए । ‘आफैंले अरु दलसमेतलाई भनेर उठाएको उम्मेदवारलाई अन्तिममा आएर यसरी साथ छाडे भने भविष्यमा कुनै पनि कार्यकर्ताले माधव नेपाललाई किन साथ दिने ? प्रश्न यो छ,’ रोकाले भने ।
मंगलबार रामबहादुर थापा बादल भोट माग्नका लागि कोटेश्वरस्थित माधवकुमार नेपालको निवासमा पुगेका थिए । त्यहाँबाट फर्केपछि बादलका सहयोगी किरण भट्टराईले माधव नेपालले बादललाई मत दिने सहमति जनाएको दाबी गरे । तर, बादलको सचिवालयको दाबीको खण्डन गर्दै माधव नेपालको सचिवालयले खिमलाललाई मत दिने निर्णयबाट पछि नहटेको स्पष्ट पारेको छ ।